सुदूरपश्चिममा घट्यो कोरोना सङ्क्रमण, जनजीवन सहज बन्दै | nepaliSamachar.com नेपालीसमाचार
Homeमुख्य समाचारसुदूरपश्चिममा घट्यो कोरोना सङ्क्रमण, जनजीवन सहज बन्दै
२०७७, १४ आश्विन बुधबार १६:०४ नेपाली समाचार मुख्य समाचार 0
विमलबहादुर विष्ट,डोटी । दुई महिनाअघिसम्म कोरोना विस्फोटक रुपमा कोरोना सङ्क्रमणमा वृद्धि भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय सङ्क्रमित छिट्टै निको पनि भएका छन् । यहाँका नौवटै जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमित निको हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायल राजपुरका अनुसार पछिल्लो समय यो प्रदेशमा कोरोना निको हुनेको सङ्ख्या पाँच हजार ९२९ पुगेको छ । कोरोनाकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । तर पछिल्लो समय निको हुने दरमा उल्लेख्यमात्रामा वृद्धि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
सो स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार यहाँ एक समय करिब सात हजार सङ्क्रमित पुगेका थिए । तर अहिले भने सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढीमा एक हजार मात्र रहेको छ । उनीह? पनि निको हुने क्रममा रहेका चिकित्सकह? बताउँछन् ।
यहाँका कतिपय गाउँपालिका पछिल्लो समय कोरोनामुक्त गाउँपालिका भनेर घोषणा पनि गरेका छन् । डोटीको बडिकेदार गाउँपालिका अहिले कोरोनामुक्त गाउँपालिका भएको छ । कोरोना सङ्क्रमित निको हुने दर बढेसँगै यहाँका गाउँघरको जनजीवन पुनःसामान्य बन्दै गएको पनि स्थानीयवासीह? बताउन थालेका छन् ।
केही समयअघि यो गाविसमा एकैपटक १३ जना सङ्क्रमित थिए । भारतबाट आएका उनीह?सँगै अ? पनि निको भएर घर फर्र्किएका बडिकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्दले बताउनुभयो । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायल राजपुरका निर्देशक डा गुणराज अवस्थीका अनुसार हालसम्म कैलालीबाट एक हजार ३३१, डोटीका ९५२, अछामका ७९५, कञ्चनपुरका ६१६, बाजुराका ४४२, बैतडीका ३२२, डडेल्धुराका २९९, बझाङका २८० र दार्चुलाका ४१ जना कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भई घर फर्किएका छन् । यहाँका नौवटै जिल्लाका करिब एक हजार जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किसकेका छन् । बाँकीको विभिन्न अस्पताल तथा आइसोलेशन राखेर उपचार हुँदै गरेको निर्देशक डा अवस्थीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार शु? गरिएको छ । कैलालीमा रहेको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालले प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्न अनुमति पाएसँगै यहाँका कोरोना सङ्क्रमितको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार शु? गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीपकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले तय गरेको मापदण्डअनुसार प्लाज्मा थेरापी विधिबाट अनुसन्धानात्मक उपचार शु? गरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । कोरोना सङ्क्रमितलाई प्लाज्मा थेरापी विधिको आवश्यकता परेमा सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले कोरोनामुक्त भएकालाई आह्वान गर्छन् । त्यसपछि रक्तदाता सम्पर्कमा आएपछि रेडक्रसका माध्यमबाट रगत सङ्कलन गरी त्यसबाट प्लाज्मा छुट्याएर सङ्क्रमितलाई उपचार गरिने व्यवस्था मिलाइएको सेती प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ ।
केही महिनाअघि नै सङ्क्रमित भएर निको हुनुभएकी यहाँको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी एक जना कर्मचारीले कोरोना सङ्क्रमणले आफूलाई खासै कुनै अप्ठ्यारो अवस्था नआएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । उहाँले यो सङ्क्रमणबाट खासै डराउनु नपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बजारमा चल्दै आएको हल्लाजस्तो त्रास होइन, आफूले सतर्कता र सजगता अपनाउँदा नै निको भएर जान्छ । “म पनि सङ्क्रमित भएकी थिएँ, घरमै बसेर तातो पानी, बेसार, गुर्जो तथा अ? स्थानीय जडीबुटी र घरायसी उपचार पद्दति पनि अपनाएँ सायद यसै कारणले होला मलाइ चाँडै नै निको भयो”, उहाँले सुनाउनुभयो । आफू १५ दिनभन्दा बढी सङ्क्रमित भएर बस्नु नपरेको उहाँले बताउनुभयो । कोरोना लागेपछि मरिहालिन्छ भनेर कसैले पनि सोच्नु हुँदैन, सङ्क्रमण भयो भने आफूले पनि सजगता अपनाउने र परिवार तथा समुदायका मानिसमा नजाओस् भनेर आफैँ अलग्गै र सुरक्षित बस्ने गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
सुदूरपश्चिममा कोरोना सङ्क्रमित निको हुँदै गए पनि भारतमा भने यसको अवस्था निकै भयावह छ । त्यहाँ हरेक दिन करिब एक लाख मानिस सङ्क्रमित थपिने गरेका समाचार नेपाली सञ्चारमाध्यमह?बाट थाहा हुन्छ । यहाँका स्थानीयह?लाई पनि यो थाहा नभएको होइन । तर पनि आफ्नो रोजीरोटीका लागि यहाँका स्थानीयवासीह? दैनिक भारत पस्न थालेका छन् । गाउँमा रोजगारी तथा कमाइ खाने पेशा नभएका कारण गुजारा चलाउन समस्या भएपछि पछिल्लो समय उनीह? पुनः भारत फर्किन थालेका हुन् । यहाँको त्रिनगर तथा गड्डाचौकी भन्सारबाट दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा सुदूरपश्चिमेली नागरिक रोजगारी अर्थात् पेट पाल्नकै लागि भारत जान थालेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलका अनुसार त्रिनगर–गौरीफन्टा नाका भएर एक हप्ताको अवधिमा सुदूरपश्चिमका चार हजार १७३ जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिक भारत पसेका छन् । सीमा क्षेत्रमा तथ्याङ्क राख्दै आएको नेपाल प्रहरीले पछिल्लो एक हप्तामा चार हजार १७३ जना नेपाली भारत पसेको जनाएको छ । त्रिनगर क्षेत्रमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउट डोकेबजार पोष्टको तथ्याङ्कअनुसार सो हप्ता ४६ जना मात्रै भारतीय नागरिक स्वदेश फर्किएका हुन् । भारतबाट नेपाल फर्किनेको सङ्ख्या भने भारत जानेको भन्दा तीनगुणा कम रहेको सुरक्षा पोष्टमा खटिएका प्रहरीले जनाएको छ । बेरोजगार बस्दा छाक टार्नसमेत गाह्रो भएपछि महामारीबीच पनि भारत फर्कनुपर्ने बाध्यता आएको रोजगारी खोज्न भारत पस्ने नागरिकको भनाइ छ । गाउँमा केही काम नपाएर जन्मथलो छाडेर जान लागेको उनीह? बताउँछन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोजगारी छोडी गाउँ आएका नागरिकले भरिभराउ भएका यहाँका गाउँघरह? पुनः खाली हुँदै गएका छन् । गाउँमा आएका नागरिक कोही भारत तथा कोही जिल्ला बाहिर कामका लागि जानेक्रम बढेसँगै यहाँका गाउँघरह? फेरि पहिलेको जस्तै खाली हुँदै गएको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका स्थानीयवासी तथा नेपाली काँग्रेसका स्थानीय नेता खडकबहादुर बोहराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोनाले गाउँ बाहिर गएका सबै घर फर्किएर रमाइलो भएको थियो, गाउँमा रोजगारी नपाएपछि गाउँले फर्किन थाले, गाउँ फेरि सुनसान हुन थालेका छन् ।”
यहाँका पहाडी जिल्लाबाट तराई जाने गाडी भरिभराउ देखिने गरेका र तराईबाट पहाड आउने गाडी भने प्रायः खाली देखिने गरेको ट्राफिक प्रहरी पोष्ट बुडरका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक राजेन्द्रबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो । रासस